Ngexesha lethu, amaxesha amaninzi amantombazana kufuneka ahlangabezane neengxaki zesikhumba. Zivela ngezizathu ezahlukahlukeneyo: ngenxa yezinto eziphilayo ezimbi, ukungondleki, ukunyuka kwamahomoni, ukunakekelwa kakubi kunye nokunye. Kungakhathaliseki isizathu, iingxaki aziyi kuvela, kufuneka zipheliswe. Kwakhona kuyimfuneko ukuqonda, ukuba emva kwenkxalabo ekhethekileyo yesikhumba efunekayo.
I-Trishag kwesikhumba esiluphilileyo: cima umsebenzi weebhaktheriya ezikhokelela kwiinkqubo ezivuthayo, ulungelelanise umsebenzi weengqungquthela ezixhambileyo kwaye ususe i-cicatrices.
I-Kozhaostanovitsya ingxaki ngenxa yokuphazanyiswa kweengqungquthela ezihlambulukileyo, ezifumaneka kwiindawo ezinzulu zolusu. Ngomlinganiselo wokukhutshwa kwamanqatha amancinci angaphantsi komhlaba ahlukeneyo kwiintlobo ezi-ezintathu eziphambili: ezomileyo, ezityebileyo, ezidibeneyo neziqhelekileyo. Ngamafutha anomnxeba kunye kunye kunye neentlobo zeengqungquthela ezikhululekileyo zinomlomo omkhulu, ngoko ke amaninzi amanqatha aphantsi angabonakali kuwo. Abanye bakholelwa ukuba ezi zithobezi zincinci ziyi-pores, ezifanele ziphathwe ngoncedo lwee-creams kunye namafutha. Kodwa eqinisweni, konke akunjalo. Iingqungquthela ezixhambileyo zinzulu kakhulu kwiindawo eziphantsi kwesikhumba. Kulezi zilwanyana kune-duct excretory, evula emlonyeni ngomlomo. Ngako oko, ukusetyenziswa kwesinye se-lotions kunye nama-creams akwanele. Oku kufuna indlela edibeneyo.
Unzima kunzima ngakumbi kunomntwana onzima
Amantombazana amaninzi, ekufumaneni ubuso bawo ubuso, khawuleza azame ukumrhoxisa aze aqale ukumncenga. Nangona kunjalo, kwiimeko ezininzi, inzame ayiphumelelanga, kuba imfihlelo engapheliyo ayikwazi ukudlulela kwindlela yokucwina. Abanye abantu bakhethe enye indlela yokulahla le nkathazo-bangela i-pimple ngekhilimu, ioli, isisombululo kunye nokunye okunjalo. Kodwa olu khetho lufanelekile. Emva koko, ezi ziyobisi zichaphazela kuphela iindawo eziphezulu zesikhumba, kodwa azingeneli ekujuleni kwayo, oko kuthetha ukuba abachaphazeli "umnqweno" wepimple. Ngokuhamba kwesikhathi, i-pimple iyanyamalala yodwa, kodwa endaweni yayo i-pigmentation, kwaye ngezinye iindawo i-pitroform, igcinwe ixesha elide.
Kungcono ukulahla i-acne ngoncedo lwe-electrocoagulation. Emva kwenkqubo, ijelo livuliwe ukususa okuqukethwe kwipimple. Emva koko, kuyimfuneko ukujoza umxube we-oksijeni-ozone okanye i-antibiotics phantsi kwayo ukukhusela ukutshaya kwamagciwane. Emva kwenkqubo enjalo, inkqubo yokuphulukana idlula ngokukhawuleza, kodwa ngamanye amaxesha kukho inqabana okanye i-pigmentation. Ngoko ke, kukulungele ukubonisana nomdematologist.
Izandla ze-Atrophic, ezibonakala emva kwe-acne, zinokupheliswa ngoncedo lwe-molecular hyaluronic acid. Kwakhona, ukusetyenziswa rhoqo kwekhilimu, ene-retinol, inceda. Umncinci umncinci, kulula ukungawulahli. Ukuba ukulingana kwebala kubandakanya ukuhluma kwe-median, okujoliswe ekuvuseleleni isikhumba nokuvuselela iindawo zayo ezingaphezulu. Ngokuqhelekileyo, iinkqubo ezi-4 zanele ngexesha leenyanga. Ezi nkqubo zenziwa ngokufanelekileyo ngexesha lekwindla-ebusika, ukuze i-pigmentation ingabonakali. Iindawo zengqungquthela zinokupheliswa ngoncedo lonyango lwe-oxygen okanye i-mesotherapy kunye ne-antioxidants kunye ne-vitamin complex.
Ukutya kunye nesimo sesikhumba
Ulusu lwethu luxhomekeke kwimeko yokucocwa kwesikhumba. Xa sisidla i-sweet, sinobuninzi kwaye sininzi kakhulu i-sebum ikhiqizwa. Ngoko ke, ukuba izizathu zokutya, kufuneka uguqule ukutya kwakho kwaye uhambelane nokutya okukhethekileyo. Kukulungele ukukhuphela ngaphandle kokutya okutya kunye nezitya ezimnandi.
Ngamanye amaxesha ukugqithisa okufudumalayo kuyingozi. Inokuqinisa emva kokuthatha ukutya. Nangona kunjalo, ngaphezu kokukhawuleza, umntu uya kuba nezinye iimpawu: ubuthathaka, intloko, ukuphazamiseka kokugaya, ubomvu, kunye nokunye okunjalo.
Ukulahla ukukhawuleza okunjalo, kufuneka ukhethe ukutya okulungileyo. Nangona kunjalo, ukwenzela ukuba ungabandakanyi iimveliso eziyimfuneko, kuyacetyiswa ukuba uye kwi-dermatologist kwaye unikeze uhlalutyo ukuhambelana nokutya.
I-ecology kunye nesimo sesikhumba
Ininzi yethu iimpumpo zivela ngenxa yezinto eziphilayo ezimbi. Iziqendu eziphezulu zesikhumba zinyanzeliswa zizinto ezininzi, ezikhokelela ekubeni imveliso ihamba emancinci, kwaye imfihlelo ihlala kuyo. Kwamanye abantu, imeko yesikhumba iphucula emva kokuphumla kolwandle. Oku kubangelwa ukuba umoya omtsha unempembelelo enhle kwimeko yesikhumba. Kodwa emva kokubuyela ekhaya, emva kweentsuku ezimbini, imeko yesikhumba ibuhlungu. Iyancipha - luhlobo olusabelayo lokukhusela emisebeni yelanga.
Ukukrazula le ngxaki, kukulungele ukwenza ukukhishwa kweekhemikhali, okuphazamisa iindawo eziphezulu zesikhumba kwaye ukhulule umzila oqinileyo we-graceous gland. Ukulungelelanisa ngokufanelekileyo i-salicylic acid, ene-anti-inflammatory and disinfecting properties. Emva kokutshatyalaliswa okunjalo, izinto ezivuthayo zimile. Ngamanye amaxesha i-cosmetologists, ngokusekelwe kwimihlobo kunye nemeko yesikhumba, batusa ezinye iintlobo zokuphamba: ngobisi, iziqhamo, i-glycolic acid kunye nezinye. I-Retinol i-peeling ayifanelekiyo wonke umntu, kuba ingenza i-aggravation ye-acne iqhube.
Isimo seHormon kunye nesikhumba
Ukugqithisa umlomo kunye nolutsha oluqhelekileyo lubangelwa ngenxa yee-sboys ze-hormonal. Kule meko, unyango lufanele lube lubanzi. Okokuqala, kuyimfuneko ukusebenzisa iimveliso ezizodwa zokucoca ezifanelekileyo uhlobo lwakho lolusu. Okwesibini, kubalulekile ukuqhuba unyango lwe-homeopathic, olujoliswe ekuqiniseni ukugcinwa kwemfihlo. Okwesithathu, udinga ukutyelela i-beautician ngezikhathi kwaye wenze i-salicylic okanye i-glycolic acid. Ukuba ixesha lokugqithisa lifikile kwaye libomvu livule izibhunqa zivele ebusweni bakho, kukulungele ukuthatha i-ozonotherapy okanye i-electrocoagulation. Ukongezelela, amantombazana anengxaki yesikhumba kufuneka ahlambuluke ngezinye izinto. Lo msebenzi awukona unyango, kodwa usebenza njengendlela yokuthintela.
Isibane se-quartz esimnyama sinika impembelelo entle kwi-acne. Ungayithenga kwi-pharmacy. Kodwa kufuneka kusetyenziswe kuphela emva kokubonisana nodokotela.
Ukunyamekela ekhaya kunye nekhanda elingenakuqhaqha
Ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe ekuhlambulukeni kwesikhumba. Iindlela ezifanelekileyo zifanelekileyo zokuhlamba kwi-gel ngesiseko se-pH esiphezulu. Ezi zithunywa ziyancipha kancinci. Ukuba ulusu lukhuni kakhulu, ii-cosmetologists zicebisa ukuhlamba i-pomace. Kodwa isepha kufuneka sikhethwe ngokucophelele. Kukho iigels ezikhethekileyo zonyango ezithengiswa kumayeza. Ngako oko, abantu abaneengxaki zesikhumba kubhetele ukukhetha imveliso ekhethekileyo yeyeza.
Kubaluleke kakhulu ukukhetha ukhilimu olungileyo. Ngesikhumba somnxeba, ama-creams awayiyo yonke into efanelekayo kwisakhiwo esinomsila, ekubeni ngokukhawuleza bavale ii-pores. Ukunxiliswa kotywala kunye neenkonzo zokuhlamba kunomisa kakhulu isikhumba. Ngako oko, ukhetho olulungileyo luya kusebenzisa ukukhanya kwe-serum kwisiseko se-gel, kunye nomxholo omncinci wamanqatha. I-serum enjalo ilungele ukhethwa kunye nedermatologist okanye i-cosmetologist.
Uninzi lwemveliso yolondolozo lwesikhumba lenza ulusu lukhuni - lumile. Oko kukuthi, i-T-zone inokukhawuleza ibe ngamafutha, kunye nebunwele kunye nezihlathi ngokuchaseneyo, iya kumiswa. Kule meko, kufuneka utshintshe isixhobo.
Ungakulibali ukuba kubalulekile ukukhetha ukulungisa kakuhle. Kuba isikhumba seoli sinokulungeleka kwi-BB cream kunye ne-matting. Kwakhona, abanini bekhumba elinamafutha bahlala benconywa kwiimfolokhwe zabo ukuba bahlambe.
Ukukhangela imibala ebusweni
Imijikelezo emnyama phantsi kwamehlo: izizathu
Izifo zesisu ngokukhulelwa
Ukuba umntwana akalala kakuhle kweenyanga ezintathu
Amaswitshisi kunye nesardard ye-cheese ne-granular
Amanzi acocekileyo kwimpilo nobuhle
Konke malunga neengqondo zendlela yokuziphatha kwamadoda ngomhla